Waa maxay macnaheedu inuu yahay Salt iyo Nuur, Qeybta 3 (Hawlgalkii Ciise ee wacdinta, Maalinta 220 laga soo bilaabo Jan. 20, 2017 / Maalin 587 tan iyo Jan. 1, 2016)
TEXT: Matayos 5: 13-16:
13 Idinku waxaad tihiin cusbadii dhulka, laakiin haddii cusbadu dhadhan beesho, maxaa lagu cusbaynayaa? Taasu waa wax aan waxba tarayn, maxaa yeelay, waa cidla, oo waa inaydaan u tegin nin la seexdo.
14 Idinku waxaad tihiin kuwa dunida; Magaalo buur ku taallu ma qarsoomi karto.
15 Oo ninna iftiin ma dhigi doono, oo wuxuu saari doonaa miskiinka, laakiinse wuxuu ku yaal dembi. oo waxay u keeneen kuwa guriga ku jira oo dhan.
Ka dib markii uu Injiilka ku wacdiyo maalin kasta 367 maalmood oo toos ah xiliga ololaha madaxtinimada ee 2016-ka, waxaan maalin walba wacdiyi doonaa 100,000 oo maalmood oo madaxweyne Donald Trump ah. Haddii aad u maleyneyso in madaxweyne cusubi uu ku jiro xafiisku waa waxa kaliya ee loo baahan yahay in lagu badbaadiyo America iyo 'America America mar labaad', waxaad si xun u khiyaanaysaa. Kaniisaddu waa in ay raacdaa oo ay "wax ka qabato waxa ugu muhiimsan: oo waxay la imaanaysaa kuwa aan rumaysadka lahayn ee Injiilka Rabbi Ciise Masiix iyo tukanayaan badbaadadooda, waayo dhibaatada Mareykanka ma aha oo kaliya madax-diidmo, siyaasiyiin iyo dad, laakiinse wadaaddada diidmada ah, kuwa wax wacdiya, iyo kaniisadaha diiday inay addeecaan Guddiga Weyn ee Rabbiga, "adduunka oo dhan u gudub, oo injiilka ku wacdiya jaahil kasta" iyo kuwa diiday inay adeecaan amarrada soo noqnoqda ee Ilaah ee "tukado iyada oo aan la joojin 'gaalada, rumaystayaasha, iyo hogaamiyayaasha siyaasadda. " Sidaa daraadeed, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ku tukatid madaxweynaha cusub, laakiin maahan in lagu soo galo dhacdooyinka siyaasadeed sida dunidu. Wax badan oo isbedelaya waa ay isbedelayaan ilaa ay dadku helaan badbaadada iyo qalbiyadooda si toos ah ula leh Rabbiga. Taasna waxa ah ololahan oo dhan oo ku saabsan.
Ololahan waxaa loo waxyooday saddex aayadood oo soo socda: 1 Korintos 2: 2 oo odhanaya, "Waayo, waxaan goostay inaanan waxba dhexdiinna ka ogaan Ciise Masiix oo ah kan iskutallaabta lagu qodbay." Falimaha Rasuullada 5:42 oo leh, "Maalin kasta oo macbudka iyo gurigaba, waxay joojiyeen in ay wax baraan oo ay ku wacdiyaan Ciise Masiix." Iyo 2 Timoteyos 2: 4 oo leh, Ninna yuusan abaalgudkiinna si kastaba ku soo degin isagoo leh, Bal yaa u qalbi qaboojin doona kii aan doortay oo keliya?
Taxanahan ma aha Masiixiyiin daruuri ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan rajeynayaa inaad tahay mid ka mid ah kuwa quduusiinta ah oo wali jecel inay maqlaan "Sheekadii hore, qadiimka hore ee Ciise iyo jacaylkiisa" - sida gabay kale ayaa leh, "Kuwa kuwa garanaya waxa ugu wacan gaajo iyo harraad si ay u maqlaan sida inteeda kale." Taxanahan ugu horreyn waa kuwa aan rumaysadka lahayn, si ay u maqlaan oo ay fahmaan Injiilka iyo in laga badbaadiyo dembiga iyo ciqaabta dembiga kaas oo ah jahannamada. Tani waa lambarka taleefanka 220 ilaa Jan. 20, 2017, maalin 587 tan iyo Jan. 1, 2016.
G.V. Wigram wuxuu yidhi, "Dhowr waxaan la joogi doonaa Masiixa, Ilaahay ma nihin inaanu ku faraxsanno isaga la'aantiis, laakiin Ilaahay ayaa marka hore inoogu markhaati furi lahaa halkan, si nalkiin badan oo aan awoodno u ilaalino."
Ciise wuxuu ku dhawaaqay inaan nahay nuurka dunida. Laakiin inta badan oo naga mid ah ayaa dhab ahaantii iftiiminaya? Intee in le'eg oo naga mid ah naga qarsoon? Haddii aan nahay nalal, waa wax aan macquul ahayn in aan la iftiimin. Ciise wuxuu ku yidhi, Dadku shakib maahee, oo waxay ku ridaan khamri ay cabbaan, laakiin waxay saaran tahay intii halligaadda oo dhan. Hase yeeshee, Masiixiyiin badan oo maanta ah maaha kuwo shidan.
Maxay yihiin siyaabo aan u qarin karno iftiinka?
Marka hore, waxaan naga dhigno iftiinkeenna adigoo aan la wadaagin Injiilka. Goorma ayuu ahaa markii ugu dambeysay ee aad la hadashay qof ku saabsan Ciise? Goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay ee aad ku soo wareegto habka Injiilka? Sida laga soo xigtay cilmi-baadhista LifeWay, 75% Masiixiyiinta oo dhan ma aysan wadaagin Injiilka qof kale oo ka badan laba jeer tan iyo markii la badbaadiyey. Habka ugu saxsan ee milixda iyo iftiinka adduunka waa inuu dadka u sheego Nuurka Caalamka.
Marka labaad, waxaan ku dhuuman nalkayaga markaan ku noolnahay dembiga. Ku noolaanshaha dembigu waxay u jahawareersanyihiin niyadjabkayaga Injiilka waxaanay naga dhigtaa iftiinkeenna. Ma sheegi karno in Ciise uu dadka ka badbaadiyo addoonsiga dembiga marka aynu nafteena u dhaqmeyno sidii inaanan xoroobin. Intaa kore, ma tusi karno adduunka si habboon markaan ku noolahay sida aduunka oo kale nafteena.
Saddexaad, waxaynu ku dhunannaa iftiinkeenna iyadoo aan xubinimo wanaagsan ka helin bulshada aan nala soo galnay. Marka uu ku jiray jadwalka jaamacadda Liberty University, Jerry Falwell mar ayaa yiri, "Haddii ay tahay Christian, waa in ay noqotaa mid ka wanaagsan." Bayaankan waxaa lagu dabaqi karaa dhinac kasta oo nolosheena ah sida Masiixiyiin. Nalalka dunidu waa inay noqdaan deris fiican, saaxiibo fiican, shaqaale ka wanaagsan, madaxyo fiican, lammaane fiican, arday fiican, macalimiin fiican. Tani maahan macnaheedu in aanu noqon karno xirfad, aqoon badan, ama ka aqoon badan kuwa kale. Maxay macnaheedu tahay in, wada shaqeyn kasta, waxaan muujin doonnaa jacaylka Masiixa, welwelka, iyo naxariista dadka oo dhan.
Adiga iyo aniga waan nahay nalalka dunidan. U diyaari doorka uu Ciise inoogu siiyey si aanu u noqonno kuwa iftiimaya mugdiga. Iftiin! Ha qarin nalkaaga. Ku rid shamac oo ku adkee si ay dadka kale u arki karaan oo ay u badbaadi karaan.
Sida Philip P. Bliss u qoray, waxaan nahay "nalalka hoose" ee ay tahay in la gubo si ay u badbaadiyaan dembiilayaasha ka soo burin qaar:
Nasiib darro cadadeena Aabbaha naxariistiisa,
Laga soo bilaabo illaa uu ka yimaaddo,
Laakiin isagu wuxuu ina siinayaa ilaalinta
Nalalka ku yaal xeebta.
Oo habeenkii dembiga waa la toosin doonaa,
Qaylo dhirifka cadhaysan;
Indhaha oo indhaha ku haya ayaa daawanaya, xiisaha,
Wixii nalalka ku yaalla xeebta.
Walaalkayow, yaanay naftaada kaa qaadin,
Qaar ka mid ah badmaaxayaasha saboolka ah, duufaan-xanaaq,
Iskuday in la sameeyo dekedda,
Mugdiga waxaa laga yaabaa in lumo.
U ogolow nalalka hoose in ay gubtaan!
Waxaad dirtaa gilam hareeraha mawjada!
Qaar ka mid ah suuxdinta liita, seeraha dhibta leh
Waad badbaadin kartaa, waad badbaadin kartaa.
Hadda, kuwa idinku jira oo aan la badbaadin, xusuusnow in Ciise yahay iftiinka dunida. Wuxuu u yimid inuu ku iftiimiyo gudcurigaaga si uu u badbaadiyo naftaada. Ii ogolow inaan kuu tuso sidaad u heli kartid isaga oo ah Badbaadiyahaaga.
Marka hore, aqbal xaqiiqda ah inaad tahay dembiile, iyo inaad jebisay sharciga Ilaah. Baybalku wuxuu sheegayaa Rooma 3:23: "Waayo, dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah."
Haatan waa war xun, laakiin waa war fiican. Ciise Masiix wuxuu ku yiri Yooxanaa 3:16: "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah." Kaliya aaminsan tahay qalbigaaga in Ciise Masiix uu u dhintay dembiyadiinna, waa la aasay, oo ka soo sara kacay kuwii dhintay by awoodda Ilaah aad si aad u noolaan kara weligiis isaga la leh. U soo ducee oo waydiiso inuu ku yimaado qalbigaaga maanta, wuuna rabaa.
Rooma 10: 9 & 13 wuxuu leeyahay, "Haddii aad afkaaga ku qirto Rabbi Ciise, oo aad rumaysan tahay in Ilaah ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa ... Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, Rabbi waa la badbaadin doonaa. "
Haddii aad aaminsan tahay in Ciise Masiix uu ku dhintay iskutallaabtaada dembiyadiinna aawadiis, waa la aasay, oo ka soo sara kacay kuwii dhintay, oo aad doonaysid inaad ku aamino badbaadadaada maanta, fadlan ila soo ducee tukashadan fudud: Aabbaha Quduuska ah, waxaan ogahay in aniga Anigu waxaan ahay dembiile iyo in aan sameeyo waxyaabo xun noloshayda. Waan ka xumahay dembiyadayda, maantana waxaan dooranayaa inaan ka soo noqdo dembiyadayda. Waayo, Ciise Masiix aawadiis, dembiyadaydii i cafi. Waxaan aaminsanahay dhammaan qalbigayga in Ciise Masiix aniga igu dhintay, la aasay, oo dib u kacay. Waxaan ku kalsoonahay Ciise Masiix sidii Badbaadiyahayga iyo waxaan dooranayaa inuu raaco isaga oo ah Rabbiga ilaa maanta. Rabbi Ciise, fadlan kaligeyga geli oo naftayda badbaadi oo noloshayda iska bedesho maanta. Aamiin.
Haddaad qalbiyadiinna ku rumaysateen in Ciise Masiix uu ku dhintay iskutallaabta, waa la aasay, oo mar kale kor u kacay, ii ogolow inaan sheego, hambalyo ku samee waxka ugu muhiimsan nolosha iyo in ay aqbalaan Ciise Masiix sidii Rabbigiinna iyo Badbaadiyeheenna! Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah si aad uga caawiso inaad kor ugu qaaddo rumaysadka cusub ee Masiixa, u gudub Gospel In Light Society.com oo akhri "Waxa aad sameyneyso marka aad gasho albaabka". Ciise Masiix wuxuu ku yiri Yooxanaa 10: 9, "Anigu waxaan ahay albaab, haddii qof uun galo, wuu badbaadi doonaa, oo wuu iman doonaa, oo geli doonaa, oo wuxuu heli doonaa daaqsin."
Haddii aad aqbashay Ciise Masiix oo ah Badbaadiyahaaga maanta, fadlan iigu soo dir email at dw3@gospellightsociety.com oo noo sheeg. Waxaa jira waxyaabo lacag la'aan ah oo aan dooneyno inaan kuu dirno. Haddii aad haysato codsi duco, fadlan nala soo xiriir annaga oo nala soo xiriir, annagana waan kuu duceynaynaa ilaa aad naga sheegto inaad joojiso.